> Resource> iPod> Olee na-etinye Podcast on iPod
Pọdkastị bu n'ezie bara uru maka ịchụkwudo on-egosi na ị Agbaghara. Mgbe ị na-enweta ọtụtụ mmasị pọdkastị site iTunes Ọbá akwụkwọ, i nwere ike ịbụ ọkụ n'obi ka mmekọrịta gị iPod ka iTunes maka pọdkastị. Otú ọ dị, n'oge mmekọrịta, ị ga-atụfu pọdkastị kwukwara na mbụ. Ọ bụrụ na ọ na-ewute gị, echegbula. Iji tinye pọdkastị ka iPod, ị nwere a bara uru omume na-enyere gị aka. Ọ bụ Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Na a usoro, i nwere ike tinye pọdkastị gị iPod seamlessly na-enweghị ọnwụ.
Otú e si etinye pọdkastị on iPod
Ke ibuotikọ emi, Aga m agwa gị otú ị na-etinye pọdkastị na gị iPod na mfe nzọụkwụ. Dị nnọọ na-eso m ka ihe na-mere!
Nzọụkwụ 1. Download na-agba ọsọ a usoro na kọmputa gị
Ma Wondershare MobileGo maka iOm na Wondershare TunesGo (Mac) dị. Download nri mbipute a usoro. Wee wụnye na-agba ya na kọmputa gị.
Cheta na: Ebe a, na-ahapụ 'ime pọdkastị nyefee na Windows version - Wondershare TunesGo. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, ị nwere ike iṅomi nzọụkwụ ma na-yiri nkuzi.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod na kọmputa
Mgbe ahụ, jikọọ gị iPod na kọmputa na eriri USB. Nke a na usoro rụrụ nke ọma na Ohere 10, Windows 8, Windows Vista, Windows 7 na Windows XP. Mgbe ahụ, a usoro amalite ịchọpụta gị iPod. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ gị iPod-egosi na n'elu ke akpan window.
Cheta na: Wondershare TunesGo arụ ọrụ nke ọma na iPod nano, iPod aka, iPod ịkpọgharịa na iPod kpochapụwo na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9. Ebe a, ị nwere ike ịlele zuru ezu Ama banyere akwado iPods. The Mac version - Wondershare TunesGo (Mac) na-akwado iPod aka 4 na iPod aka 5 dabeere iOS 5 / iOS 6 / iOS 7 / iOS 8 / iOS 9.
Nzọụkwụ 3. Put pọdkastị on iPod
Dị ka ị na-ahụ, gị faịlụ na iPod na-egosipụta na-ekpe sidebar. Pịa "Media". N'elu akara ụfọdụ akara ngosi. Pịa "Pọdkastị" iji bugote Podcast window.
Pịa "Tinye". A faịlụ nchọgharị window Pop elu. Ịnyagharịa ebe ebe pọdkastị na-azọpụta. Họrọ pọdkastị na ị chọrọ ka ịgbakwunye na-etinye ha na gị na iPod. Ma ọ bụ, ị nwere ike pịa nọdụ n'okpuru "Tinye". Mgbe ahụ, ma tinye Podcast faịlụ na pọdkastị nchekwa gị iPod. Echefukwala na-gị iPod ejikọrọ oge niile.
Download a usoro na-etinye pọdkastị on iPod.